Wararka - Haddii baakadaadu ay tahay mid la nuujin karo ama deegaanka ku habboon
Haddii baakadaadu ay tahay mid baaba'aya ama dabiici ku habboon
Eco-friendly hadda waxay noqoneysaa isbeddel, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa daneynaya maalinba maalinta ka dambeysa, maadaama aan wajaheyno kor u qaadista masiibooyinka ay sababaan burburka dabeecadda annaga. Anaga ahaan, soo saare ahaan sanduuqa wax lagu rido, had iyo jeer waxaa nala weydiyaa, haddii sanduuqaagu uu yahay mid nooluhu karayo?
Marka hore, bal aan ogaanno waxa lagu noolaan karo?
“Biodegradable” waxaa loola jeedaa awooda waxyaabaha in lagu kala jajabiyo (lagu dillaaco) ficillada noolaha yaryar sida bakteeriyada ama fungi noolaha (leh ama aan lahayn oksijiin) inta lagu milmayo deegaanka dabiiciga ah. Ma jiraan waxyeello xagga deegaanka ah inta hawshu socoto.
Kadib, aan aragno waxyaabaha aan u isticmaalnay sanduuqa? Caadi ahaan waa kartoon cawlan, warqad dahaaran, warqad farshaxan, xabag lagu daray rinjiga daabacaadda iyo xaddidaadda.
Dhab ahaantii kuwa aan noqon karin qayb baadiyeyn kara waa xabagta iyo xaddidaadda.
Horta aan dhahno xabagta. Inta badan xabagta loo isticmaalo suuqa, waa la duudsiin karaa laakiin waxay u baahan tahay xaalad aad u adag. Laakiin waxaa jira wax dhejis ah oo la alifay, taasi waa mustaqbalkeena ifaya ee warshadeena.
Xaddidaadda, waxaan dooran karnaa alaabta ceyriinka ah iyadoon lagu darin wax xaddidaad ah ama aan ku darno xaddidaadda saliidda rinjiga.
Sidaa darteed, asal ahaan, sanduuqayaga wax lagu duubo waa bey'ad-saaxiibtinimo.